Dec 23, 2016 Bringing smiles to all-girls-school for the orphans on Christmas holiday | myanmarorphans.org
မေတ္တာမွန် ဂေဟာ က ကလေးငယ်များဆီ အပြုံးများစွာ သယ်ဆောင်သွားခြင်း
By Wai, Editorial Staff for Mary K. Yap Foundation (Yangon Project Office) February 2, 2017
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ရဲ့ နံနက်ခင်းနေရောင်ခြည်ဟာ လမ်းမတွေပေါ် ဖြာကျနေခဲ့ပါပြီ။ Mary K. Yap Foundation ကြီးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးပီတာ ဦးဆောင်တဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများဟာ ရန်ကုန်ကနေ မှော်ဘီအလွန်က aမြောင်းတကာကျေးရွာလေးဆီကို သွားရောက်ဖို့အတွက် တက်ကြွစွာ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ မှော်ဘီအလွန် မြောင်းတကာကျေးရွာလေးမှာ ရှိတဲ့ မေတ္တာမွန် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတ ဂေဟာလေးမှာ ရှိတဲ့ ကလေးငယ် ၃၂ ယောက်အတွက် အပြုံးပန်းတွေ ပွင့်လန်းစေဖို့၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်စေဖို့အတွက် Foundation မှ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုကို သယ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။
အဲဒီလက်ဆောင်ကတော့ ကလေးတိုင်းရဲ့ မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းတွေပွင့်လန်းစေမယ့် မျက်လှည့်ဆရာ မင်းလက်ရာပါပဲ။ ဒီလက်ဆောင်ကိုတော့ သူတို့လေးတွေ နေ့လည်စာစားပြီးချိန်မှ ထိတွေ့ခွင့်ရမယ် လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒါအပြင် ‘ကလေးတစ်ယောက် စာအုပ်တစ်အုပ်’ဆိုတဲ့ Foundation ကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ကလေးငယ်တို့အတွက် စိတ်အာဟာရ၊ နှလုံးသားအာဟာရကို ဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် ရသစာအုပ်များး၊ ပုံပြင်စာအုပ်များကိုပါ သယ်ဆောင်သွားပါသေးတယ်။ နည်းပညာ၊ ဘာသာစကားလေ့လာဖို့အတွက်လည်း ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ စာအုပ်များအပြင် အိမ်တွင်းမှုဖြစ်တဲ့ သိုးမွေးထိုးနည်း စာအုပ်များလည်း ပါရှိပါသေးတယ်။ စစ္စတာ ကြီး ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မေတ္တာမွန်ဂေဟာ မှာ ငါးတန်း ကစ ဆယ်တန်းအထိ မိန်းကလေး စုစုပေါင်း ၃၁ ယောက် ရှိပြီး တက္ကသိုလ် တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီယူဆောင်သွားတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ ကလေးငယ်တို့အတွက် ဘဝခွန်အားတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
မှော်ဘီတိုးဂိတ်ကို ကျော်လွန်အပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ မြောင်းတကာ တာဆုံမှတ်တိုင်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ တဲလေးတစ်လုံးနဲ့အတူ “မိဂဒါဝုန်တောရကျောင်းသို့” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် လေး ထောင်ထားတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးရဲ့ ထိပ်မှာတော့ ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်ကိုယ်စီ ဆောင်းထားတဲ့ ကလေးငယ်များနဲ့အတူ မေတ္တာမွန်ဂေဟာဆီ စောရောက်နေတဲ့ Foundation ရဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လေးတွေကလည်း လက်အစုံကို ဝှေ့ယမ်းပြနေကြပါတယ်။
နွေးထွေးတဲ့ ကြိုဆိုမှုကို လက်ခံရယူပြီးနောက်မှာတော့ မညီညာတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးထဲကို ကွေ့ဝင်လိုက်ကြပါတယ်။ ၇ မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ မေတ္တာမွန် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတ ဂေဟာ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ပြာနဲ့အတူ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေတဲ့ စစ္စတာကြီး လေးယောက်ရယ်၊ ဖြူစင်အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေကို တွေ့ရှိရပါတော့တယ်။ မညီညာတဲ့ လမ်းတွေ၊ သွားလာရခက်ခဲမှုတွေ၊ အချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေကြောင့် စိတ်စောမှုတွေဟာ ဒီအချိန်မှာတော့ အဝေးကို လွင့်သွားခဲ့ပါပြီ။ မေတ္တာမွန်ဂေဟာထဲက ကလေးငယ်တို့ရဲ့ မဝံ့ရဲတဲ့ အပြုံးတွေ ကို ပိုပြီး ဝံ့ဝံ့စားစားပြုံးလာနိုင်စေဖို့၊ မှိန်ဖျော့နေတဲ့ မျက်လုံးအရောင်လေးတွေကို ပိုပြီးတောက်ပလာစေဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ အထူးလက်ဆောင်ကတော့ အခန်းလေးတစ်ခုထဲ မှာ သွားပြီး ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါပြီ။
Under the sophisticated scenes of the Magician masterpiece, the children are wearing smile and have been anxiously looking forward which scenes will become. We aimed that to carry the smile to orphans in Christmas Time and all people have been enjoining with each smile cause of our activity.
Foundation ရဲ့ ဝန်ထမ်းများဖြစ်တဲ့ မီမီ၊ နန်း၊ ထက်၊ လေးတို့က ကလေးတို့အတွက် စားသောက်ဖွယ်၇ာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့အလုပ်ရှုပ်နေသလို စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကိုနိုင်လင်းတစ်ယောက်လည်း ကလေးတို့ရဲ့ နေထိုင်ရာနေရာများ၊ ထမင်းစားခန်းများ၊ မေတ္တာမွန်ဂေဟာရဲ့ စိုက်ခင်းများကို ကင်မရာနဲ့ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ရင်းအလုပ်ရှုပ်နေပါတော့တယ်။ ကလေးငယ်တွေ နေ့လယ်စာ စားအပြီးမှာတော့ Foundationရဲ့ အထူးလက်ဆောင် မျက်လှည့်ဆရာ မင်းလက်ရာ ရဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ မျက်လှည့်အစီအစဉ် ဆီ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
မျက်လှည့်ဆရာ မင်းလက်ရာ ရဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ ပြကွက်အောက်မှာ ကလေးငယ်တွေဟာ အပြုံးကိုယ်စီ ပြုံးလို့၊ ဘာပြကွက်တွေလာမလဲလို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပြီ။ ဒီလို ခရစ်စမတ် ကာလမှာ ကလေးငယ်တွေဆီကို အပြုံးတွေ သယ်ဆောင်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ Foundation ကြီးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ ခုချိန်မှာတော့ ပီတိတွေ ဖြာဝေစေခဲ့ပါပြီ။
“ဒီလို ခရစ်စမတ်အချိန်အခါဆိုတာ မိသားစုနဲ့ အတူတူ ရှိနေချင်တဲ့အချိန်မျိုးလေ.. ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မိဘမဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ ..အတူတူ ရှိမနေနိုင်တဲ့ သူတို့အနေနဲ့ အထီးကျန်မှာကို တွေးမိလို့ Founation အနေနဲ့ ကလေးတွေ ပျော်ရွှင်စေချင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ ဒီခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ဖြစ်တာပါ… ဒီဂေဟာမှာ ရှိတဲ့ကလေးတွေက မိဘမဲ့ ကလေးတွေ အပြင် မိခင်တစ်ဦးတည်း၊ မိခင်တစ်ဦးတည်းပဲ ကျန်ရှိတဲ့ ကလေးတွေရှိသလို မိဘရှိပေမယ့် ငွေကြေးချို့တဲ့လို့ ပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေ ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။’’
‘‘Mary K. Yap Foundation ဘက်က မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက် ဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတာ ၁၅ နှစ်လောက်တော့ ရှိခဲ့ပါပြီ၊ သူတို့ဘဝ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ဖို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ အလေးထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ ဘဝရှင်သန်နေထိုင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ အားစိုက်ထုတ်နေတဲ့ Mary K. Yap Foundation ကြီးအနေနဲ့ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် ကလေးငယ်တို့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေ ဆင်မြန်းပေးခွင့်ရခြင်းအတွက် ကြည်နူးကျေနပ်မိပါတယ်။ Foundation ကြီးကို အားပေးထောက်ပံ့နေတဲ့ စေတနာရှင်များလည်း ပြုံးပျော်ကြည်နူးမယ် လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။”
‘ဒီနေ့မှာတော့ ကလေးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းတွေ၊ မုန့်နဲ့နေ့လယ်စာအပြင် ကလေးတွေကို ဒီထက်ပိုပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ မေတ္တာမွန်ဂေဟာကို လှူဒါန်းငွေ ၅သိန်း တိတိ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်၊ ကလေးငယ်တွေအတွက် အနစ်နာခံဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ဒီိလိုဂေဟာကို လှူခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာရပါတယ်’
ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြောနေတဲ့ ဦးပီတာရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေ ပြည့်နှက်နေသလို Mary K. Yap Foundation ကြီးမှ စေတနာရှင်များလည်း ပြုံးပျော်နေကြမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ Foundation က လှူဒါန်းထားတဲ့ စာအုပ်ကိုယ်စီ ကိုင်ပြီး ဦးပီတာရဲ့ ပြုံးပျော်နေတဲ့မျက်နှာကို ငေးမောကြည့်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ မျက်နှာမှာလည်း အပြုံးအပျော်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ မျက်လှည့်ပွဲ ပြပြီး မကြာမီအချိန်မှာပဲ ကလေးတို့ရဲ့ စာသင်ခန်းထဲမှာ သီချင်းသံတွေ ညံခဲ့ပါပြီ။ Foundation က စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကလည်း သီချင်းများ ကို အားမာန်အပြည့်၊ ဝမ်းသာကြည်နူးမှုအပြည့်နဲ့ သီဆိုနေခဲ့သလို ကလေးများရဲ့မျက်နှာမှာလည်း အပြုံးတွေ နေရာယူခဲ့ပါပြီ။
သီချင်းသံအဆုံး Merry Chrismas To You All ဆိုတဲ့ တညီတညာတည်းထွက်ရှိလာတဲ့ အသံနဲ့အတူ ဂေဟာတစ်ခုလုံး ကြည်နူးဝမ်းမြောက်တဲ့ လက်ခုပ်သံများ ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။